Michael Bloomberg, musharixii khasaariyay nus bilyanka doollar |
Michael Bloomberg, musharixii khasaariyay nus bilyanka doollar
Dalka Mareykanka waxaa wali laga dhowrsugayaa natiijada rasmiga ah ee doorashada xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo ka qabsoomtay gobolada dalka Mareykanka.
Doorashadaas oo loogu magac daray Super Tuesday ayaa waxaa ka qeybgalay musharixiin badan oo ay kamid yihiin Bernie sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg iyo kuwa kale.
Balse iyadoon ilaa iyo iminka aanan la shaacinin doorashada ayaa waxaa tartanka isaga haray duqii hore ee magaalada New York, Bloomberg oo malaayiin doolar ku bixiyay ololihiisa doorashada.
“Saddex bilood kahor waxaan tartanka u galay si aan uga adkaado madaxweyne Donald Trump, balse maanta waan isaga harayaa”,ayuu Blomberg ku sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray.
Mr Bloomberg ayaa ugu yaraan lacag dhan 409 milyan oo doollar ku kharash gareeyay ololihiisa doorashada, si uu u noqdo musharaxa xisbga dimuqraadiga ku matela doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo dhic doonta bisha Nofembar ee sanadkan.
In Bloomberg uu isaga haray loollanka waxay ka dhigan tahay in uu khasaariyay lacag dhan nus bilyan dollar.
Ereyga khasaaro waaxaa la sheegaa in uu yahay mid aan isaga micna badan ugu fadhinin, maadaama uu yahay ganacsade hantidiisa lagu qiyaasay 60 bilyan oo doolar.
Lacagtaas uu khasaariyay Bloomberg ayaa dadka qaar ay u arkeen inay waxtar u noqon kartay dadka uu doorashada u galay ee uu doonayay in uu noolashadooda wax ka badelo.
Tusaale waxay lacagtaas haddii la siin lahaa ay bixin lahayd deymaha lagu leeyahay ardayda jaamacadaha Mareykanka ee gaaraya 150-ka kun ama ay guryo u iibin kartay 2,200 oo shacabka Mareykanka oo aan heysanin meel ay ku hoydaan.
Lacagta uu Bloomberg ku kharash gareeyay ololihiisa ayaa la sheegay inay ahayd lacag uu isaga lahaa, jeebkiisana uu ka bixiyay.
Bloomberg ayaa sidoo kale sheegay in uu taageeri doona madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Biden.
“Waxaan marwalba aaminsanaa in Trump oo laga adkaado ay u baahan tahay in loo midoobo oo la taageero musharaxa ugu cadcad, kadib coddeyntii shalay way iska caddahay in musharax ugu cadcad uu yahay saaxiibkey Joe Biden,” ayuu ku sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray Mr Bloomberg.
Kharashka ugu badan ayaa la sheegay in uu adeegsaday kahor maalmihii codbixinta. Bloomberg ayaa la sheegay in 14-ka gobol ee laga codeeyay uu codad fiican ka helay gobolka American Samoa oo keliya.
Joe Biden ayaa sidoo kale ku guuleystay 10 kamid ah 14-ka gobol, taas o ka dhigeysa in uu yahay musharaxa ugu cadcad.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa la saadaalinayay in aanu waxba ka heli doonin Texas, balse waxaa uu halkaas kaga adkaaday ninka ay is-hayaan ee Bernie Sanders.
Haseyeeshee Mr Sanders ayaa lagu wadaa in uu ku guuleysto gobolka California oo kamid ah gobolada ugu saameynta badan dhanka codbixinta.